Yini inombolo yami ye-visa? Sikukhombisa ukuthi ungayithola kanjani | Izindaba Zokuhamba
Yini inombolo yami ye-visa?
UMonica sanchez | | Amathiphu
Uma uhlela ukuthatha uhambo oluya ezweni, uzodinga i- i-visa. Le yimvume yangaphambilini enikezwe yizwe lapho uya khona ngobunxusa balo noma inxusa ezweni lakubo. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-visa, futhi kuzoya ngokuthi uhlela ukuhlala isikhathi esingakanani, ukhetha okukodwa noma okunye.
Kulesi sihloko sizochaza ukuphi futhi kanjani ukucela khona, futhi sizokusiza ukuthola inombolo yakho ye-visa. Ungaphuthelwa.
1 I-visa noma i-visa, idokhumenti ebalulekile yokuhamba
2 Izidingo zokufaka isicelo se-visa
3 Izinhlobo zeVisa
4 Yimaphi amazwe adinga i-visa yesakhamuzi saseSpain?
5 Ungasifaka kanjani isicelo se-visa yabavakashi?
6 Bangangincisha i-visa?
7 Kuthatha isikhathi esingakanani ukucubungula i-visa?
8 Yini inombolo yami ye-visa?
I-visa noma i-visa, idokhumenti ebalulekile yokuhamba
I-visa yidokhumende enamathiselwe kumaphasipothi yiziphathimandla ekhombisa ukuthi idokhumenti ihloliwe yathathwa njengevumelekile. Kuphoqelekile ukuyigqoka emazweni amaningi. Isibonelo, e-United States, noma ngabe uzochitha izinsuku ezimbalwa noma uma ufuna ukuhlala lapho, kuzofanele uhambe nawo, uma kungenjalo esikhumulweni sezindiza bazokubuyisela emuva.
Izidingo zokufaka isicelo se-visa
Imfuneko kuphela ukuthi ukuhlala kumele kube ngaphezu kwezinsuku ezingama-90 (izinyanga ezintathu).
Ngokuvamile, kunezinhlobo ezimbili ze-visa:
Hlala: Lokhu kuzoba yilowo okufanele ucele uma uza ohambweni noma wezifundo.
Indawo yokuhlala: uma uza emsebenzini (uzisebenza noma usebenza) noma uzohlala uphile.
Kepha kuya ngezwe nesizathu sokuhamba kwakho, kukhona okunye okunye:
Osomaqhinga, izikhulu, abasebenzi bezinhlangano zamazwe omhlaba kanye ne-NATO
Yimaphi amazwe adinga i-visa yesakhamuzi saseSpain?
Uma ungowaseSpain futhi uzoya kunoma yiliphi kulawa mazwe, ngaphezu kwe-United States, uzodinga ukufaka isicelo se-visa:
Ungasifaka kanjani isicelo se-visa yabavakashi?
I-visa yabavakashi, eyaziwa nangokuthi i-B2, yidokhumende oyidingayo ukuya ezweni. Izokusiza ukubona izindawo, ukuvakashela umndeni noma abangane, noma ukwelashwa; esikhundleni salokho, ngeke ukwazi ukuyisebenzisa ukuze usebenze. Uma abokufika bethola, bangakhansela i-visa yakho.
Le visa engeyona eyokufika, okusho ukuthi empeleni awuhleleli ukuhlala unomphela ezweni. Uma ekugcineni ushintsha umqondo wakho, kuzofanele ufake isicelo se-visa ehambisanayo.
Ukukucela, Kufanele uye ku-embassy noma i-consulate yezwe oya kulo ezweni lakho lokuzalwa. Thatha isithombe sakho esibonisa ubuso bakho nepasipoti. Futhi akulimazi ukuthatha ikhadi lesikweletu, ngoba ezimweni eziningi kufanele ukhokhe imali.
Kuyaqabukela, kepha kuya ngesimo ngasinye. Ukugwema lokhu, zama ukukholisa umphathi wezwe ukuthi, okokuqala, awuhleleli ukuhlala ukuze uphile bese kuthi, okwesibili, ukuthi unezinsizakusebenza ezanele. Ngalesi sizathu, kufanele wazi ukuthi uma ufake isicelo sekhadi lokuhlala futhi ucela i-visa, kungenzeka ukuthi ngeke bakunikeze.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukucubungula i-visa?
Uma uletha konke ngesandla bese kuvela ukuthi imibhalo edingekayo ilungile, imvamisa ayithathi ngaphezu kwalokho izinsuku ezinhlanu zebhizinisi. Akukuningi, futhi ungakusebenzisa ukuhlela uhambo lwakho.
Uma usunayo, ungahle uzibuze ukuthi iyini inombolo ye-visa, ngoba la makhadi anayo inombolo enkulu yezinombolo ezinezici zazo, ngakho-ke ake sibone ukuthi singaziqonda kanjani ngokushesha.
Ukuze sikwazi ukuthola inombolo yeVisa embhalweni, kufanele sibe nayo ezandleni zethu futhi sikwazi ukuyibona ngaphambili. Ngale ndlela, singabuyekeza kuphela ulwazi olubomvu ngasesandleni esingezansi, ngokunembile uchungechunge lwezinombolo ezethula lezi zimpawu inombolo yethu ye-Visa esilindelwe isikhathi eside.
Ingabe usitholile? Manje kufanele nje bhala phansi inombolo ye-visa noma ngekhanda ukugwema izinkinga. Ngaphandle kwalokhu akufanele ube nenkinga ngokwazi ukuthola inombolo yethu ye-visa, akuvamile ukwehluka.
Le nombolo ye-visa izokusiza lungisa kabusha i-visa yakho uma kwenzeka ufuna ukuhlala isikhashana. Vele, khumbula, uma isizathu sohambo lwakho siguquka, kubalulekile ukuthi ufake isicelo se-visa ehambisanayo. Ngakho-ke ngeke kudingeke ukhathazeke nganoma yini.
Siyethemba ukuthi sikusizile ukuthi wazi ukuthi yini i-visa, ukuthi ingeyani nokuthi ungayithola kanjani inombolo yakho. Ube nohambo oluhle!
Amaphasipoti amahle kakhulu futhi amabi kakhulu wokuhamba emhlabeni
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Yini inombolo yami ye-visa?
Uhlobo lwe-visa (B1 / B2) oluvela e-EU enginalo lunebhakhodi, sengivele ngiluskenile futhi luyafana nalolo oluvela ohlangothini lwesokunene sebhakhodi, kolunye uhlangothi lwe-visa, Okwamanje ngiyibhala kwifomu lokuhamba engibuza yona, ayingazi. Ithi kufanele kube yincwadi elandelwa ngamadijithi ayi-7 (#s) noma amadijithi ayi-8 (#s) nokuthi itholakala engxenyeni engezansi kwesokudla yedokhumenti futhi yilapho inombolo engiyikhombisile ngaphambili nengikwenzile ukutholwa kungaziwa njengenombolo yami ye-visa.
Ukuhamba nge-Emirates, Fly Emirates
Amathiphu okuthola izindiza ezingabizi kakhulu